महाशिवरात्री- बुझ्नैपर्ने तथ्य र मनन गर्नैपर्ने भावहरु – Ramjham Nepal
Home>>समाचार>>महाशिवरात्री- बुझ्नैपर्ने तथ्य र मनन गर्नैपर्ने भावहरु
महाशिवरात्री- बुझ्नैपर्ने तथ्य र मनन गर्नैपर्ने भावहरु
९ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १०:२६ 70 Views1
वैदिक मन्त्रहरुमा रुद्र, श्रीपशुपति महाशिव, महादेव, आशुतोश, अघोर, सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, ईसान रुद्र आदि नामहरुबाट चारै वेदका ऋचाहरुमा भगवान शिवको स्तुति गरिएको छ । अन्वेषकहरुले नक्षत्र कालगणना अनुसार वैदिककालीन सभ्यता ३० हजार वर्षभन्दा पनि पूर्व मानेका छन् । ज्योतिष शास्त्र अनुसार फाल्गुण कृष्णपक्ष त्रयोदशी र चतुर्दशी सन्धि रात्रीलाई महाशिवरात्री मानिएको छ ।
धर्मशास्त्र अनुसार रात्री चार प्रकारका हुन्छन् –
कालरात्री– (महाअष्टमीको रात्री)
मोहरात्री– (कृष्ण जन्माष्टमीको रात्री)
दारुणरात्री– (होली पूर्णिमाको रात्री)
भगवान शिव र आद्यशक्तिको आराधना गर्ने मुख्य पर्व हो महाशिवरात्री । भगवान शिवका गणहरू नाग, नन्दी, भृंगी, चौसठ्ठी योगिनी, क्षेत्रपाल, वेताल, महाकाली, वीरभद्र आदिको आह्वान पूजा गरेर महाशिवरात्री मनाइन्छ । सम्पूर्ण अक्षर, सप्तस्वर, नाद, व्यञ्जन, परा–अपरा विद्याका स्रोत भगवान शंकारलाई नै मानिएको छ ।
शिवको पूजा रात्रीको समयमा गरिन्छ । जवकि दिनमा पनि व्रत, उपवास गरेर रात्रीकालीन समय भगवान शिवको पूजा गर्ने विधान छ । भगवान शंकर सत्व, रज तथा तम तीनै गुणभन्दा माथि मानिएकोले संहार शक्तिका अधिष्ठातृ देवता हुन् । त्यसैले अन्धकारयुक्त रात्री शंकरजीलाई प्रिय लाग्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।
कृष्णपक्ष र शुक्लपक्ष गरी महिनामा दुई पक्ष हुन्छन् । शुक्ल पक्षमा चन्द्रमा क्रमशः पूर्ण स्थितिमा आउने भएकाले चराचर जगतका सम्पूर्ण रसवान् पदार्थहरूको पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै जान्छ । त्यसैगरी कृष्णपक्षमा चन्द्रमा क्रमशः क्षीण हुँदै जाने हुँदा रसवान् पदार्थहरूले पनि क्षीण हुँदै जान्छन् । चन्द्रमा कृष्णपक्ष अमावश्यामा एकदमै क्षीण हुने हुँदा त्यसको प्रभाव भूमण्डलका सम्पूर्ण प्राणीमा पर्दछ । कृष्णपक्षको यही रात्रीमा शिवजीको आराधना गर्ने नियम बनाइएको हो ।
कृष्णपक्ष त हरेक महिनामा हुन्छन् तर ती हरेक महिनाको त्रयोदशीको रात्रीलाई किन शिवरात्री भनिँदैन ? अवश्य पनि हरेक महिनाको त्रयोदशीको रात्रीलाई महाशिवरात्री मानिँदैन तर शिवको आराधना गर्ने रात्री भने मानिन्छ ।
फाल्गुण कृष्ण त्रयोदशी र चतुर्दशीको सन्धि रात्री ‘महाशिवरात्री’ हो । यसकारण क्षयपूर्ण तिथि अमावश्याको अन्धकारको दुष्प्रभावबाट बच्नका साथै मानव जीवनमा ज्योति, शान्ति, समृद्धिका लागि एक दिन पहिले अर्थात् त्रयोदशीको रात्रीमा शिवजीको उपासना गर्ने परम्परा राखिएको हो ।
महाशिवरात्रीमा बालेको धुनीको विभूत तिलक शिशिर ऋतुपछि वसन्तको आगमनको स्वागतका लागि मनाइने वसन्तोत्सव पर्व फाल्गुण शुक्ल पूर्णिमा (होली पूर्णिमा) का दिन धारण गर्ने विधान छ । रक्षाबन्धनको दिन बाँधेको रक्षासूत्र गाईतिहारे औंसीका दिन गौपूजा गरी अर्पण गरी गाईको पुच्छरमा बाँधेजस्तै ।
वसन्त ऋतुको सुरुआतसँगै चारैतिर उजाड वातावरण, पतझरका कारण प्रकृति सुक्खा र फुस्रो देखिन थाल्छ । यस्तो लाग्छ, भगवान शिवको रौद्रशक्ति प्राकृतिक सुन्दरताको संहारमा लागेको छ । रुद्र एकादश रूपमा हुने भएकाले वर्षको एघारौं महिना अर्थात् फागुनमा शिवजीको पूर्ण स्वरूपको अवस्थामा महाशिवरात्री पर्वको निरूपण गरिएको हो ।
भगवान शिवका द‍ृश्य जगत्मा पाँच मुख छन्:
५) इशान रुद्र
यी हुन पशुपतिनाथका पाँच स्वरुप
चराचर जगत, पाँच तत्व र मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ऊर्जा, चेतनाको यही नै हो पशुपतिनाथको स्वरुप ।
भगवान शिवको त्रिशुल तीन शक्तिले युक्त आयुध हो । करोडौं–करोड वर्ष पहिले सृष्टिसँगै र वनस्पतिको अस्तित्व धरतीमा रहेको कुरा वैदिक वाङ्मय र आधुनिक अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेका छन् । त्रिशूल नामधारी आयुध एक तीरमा दुइटा शूल जोडेर त्रिशक्तियुक्त, त्रिनेत्रधारी भगवान शिवको आयुध वन्दछ । शशांकशेखर त्रिशूलरूपी आयुधधारी भगवान रुद्रलाई वैदिक वाङ्मयका ऋचाहरूमा स्तुति गरिएको छ । भगवान शिवले धारण गरेको त्रिशूल नै संसारको सबैभन्दा पुरानो आयुध (अस्त्र) हो ।
संसारमा तीन प्रकारका शक्तिहरूले विशेष काम गरेका हुन्छन् । पहिलो शक्ति सृष्टि, दोस्रो पालन र तेस्रो संहार । आधुनिक भाषामा भन्दा गतिशीलताको कारण (इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन र प्रोटोन) त्रिशक्ति निरन्तर क्रियाशील रहन्छन् ।
शिवको हातमा रहेको त्रिशूलले तीन प्रकारका ताप (आधिभौतिक, आध्यात्मिक र आधिदैविक) को समन गर्दछ । सृष्टिको आदिधर्म भगवान शिवबाट प्रतिपादित हुन्छ । आदिशास्त्र पनि त्रिशूल नै हो । त्रिशूल, वज्र, डमरु, पाश भगवान शिवका आयुध हुन् ।
वेदमा चर्चा पाइन्छ भुजाहरूमा सुवर्ण धारण गर्ने रुद्रलाई नमस्कार छ, जीवहरूको पालन गर्ने पालनहार रुद्रलाई नमस्कार छ । हिमालय–कैलाशमा बसेर सम्पूर्ण चराचर जगत्मा शासन गर्ने त्रिशूलधारी रुद्रलाई नमस्कार छ ।
भगवान शिवले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद–मात्सर्य अहंकारले लठ्ठ परेर नसाले ग्रस्त संसारका प्राणीजगत्लाई उपदेश दिनका निमित्त कालकूट विष कण्ठमा धारण गर्नुभयो । मानिसभित्र रहेको क्रोध, दम्भ, अहंकार समन गर्न भगवान शिवले संसारको सृष्टि बचाउन कालकूट विष ग्रहण गरेर प्राणी मात्रलाई कल्याण प्रदान गरे ।
रसायनमा शास्त्र महाविष कालकूट हो भने मन्दविषहरू भाङ, धतुरो, गाजा आदि हुन् । अहंकारले ग्रस्त प्राणी मन्दविषले ग्रसित छ त्यसबाट बच्न भगवान शिवले कालकूट धारण गरे । सृष्टि र संहारका दुवै शक्ति शिवमा निहित छन् ।
भगवान शिवलाई पञ्चामृत (दूध, दही, घिउ, मह, सक्कर), बेलपत्र, भाङ, धतुरो सांसारिक मन्दविषहरू भगवान रुद्रलाई अर्पण गरी आफू शाश्वत् शान्ति प्राप्त गर्ने मार्गतर्फ लाग्नुपर्दछ ।
शिवलिंगको उत्पत्तिको सन्दर्भ
श्रीपशुपतिको मूल प्रकृति के हो भन्ने विषयमा वैदिक धर्मशास्त्रहरूमा उल्लेख पाइन्छ ।
पशुपतिस्वरूप लिङ्ग प्रार्दुभावको सन्दर्भमा, परम्शक्तिको मूल सत्ताबाट ज्योतिर्मय महालिङ्ग उत्पन्न भयो । त्यो ज्योतिर्मय अवस्थाबाट पाँच तत्वलाई प्रतिनिधित्व गर्दै श्री पशुपतिनाथ महालिङ्ग प्रकट भए । शरीरधारी लिंगस्वरूपमा भगवान पशुपतिनाथ उत्पन्न भए । अर्को एक पौराणिक कथनअनुसार, पाण्डवहरूले भगवान शिवलाई खोज्दै जाँदा अरण्यक वनमा भगवान शिव भैंसीको रूप धारण गरेर बसेका थिए । पाण्डवहरूले भैंसीको रूपमा बसेका महाशिवलाई देख्नासाथ चिने र भैंसीरूपी शिवको पुच्छर समाते । आधा भाग केदारेश्वर भगवान शिव केदारनाथमा विराजमान भए भने अन्य ज्योतिर्लिंगको शिरोभागको रूपमा भगवान पशुपतिनाथ प्रकट भए र पाण्डवसहित सम्पूर्ण देवगणले पूजा गरी स्तुति प्रार्थना गरे ।
भगवान पशुपतिनाथको निर्माण तथ्य र किटानका साथ कहिलेदेखि शुरु भयो भन्ने अभिलेखहरु पाइँदैन । विभिन्न किम्वदन्ती तथा पौराणिक कथनअनुसार गोपाल वंशका ग्वालाले ज्योतिर्मय स्वरुप भगवान पशुपतिनाथमा गाईले दूध चढाएको अवस्थामा देखेर त्यो स्थानमा उत्खनन् गर्दा ज्योतिर्मय भगवान शंकरले पारसमणि स्वरुपमा दर्शन दिएको प्रसंगहरु पाइन्छ ।
भगवान पशुपतिनाथलाई पशुपाश विमोचक पनि भनिन्छ । मनुष्य जन्मँदा पशुत्व भावबाटै धरतीमा आएको हुन्छ । भगवान शिवको अलौकिक कृपाबाट उसमा प्राण गतिशील हुन्छ । ‘शि’ को ईकार हटाउँदा शव शब्द बन्दछ । शिवबाट ईकार हटाउँदा शव वन्दछ । ‘इ’को अर्थ ऊर्जा हो । त्यो ऊर्जा शरीरबाट निक्लेपछि शरीर शव वन्दछ । शवमा ईकार जोडिएपछि मात्र शिव बन्छ । यहाँ ‘ई’ को अर्थ ऊर्जा हो । शवमा ऊर्जाको गतिशीलता प्राप्त भएपछि मात्र प्राणी चेतनशील र गतिशील तथा ज्योतिर्मय बन्दछ । शक्ति, ऊर्जा र विकासविना कुनै पनि पदार्थ तथा जीवको अस्तित्व कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
पशुपति स्वरूप शिवलिंगको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने विषयमा उत्तर दिँदै स्कन्द कुमार भन्छन्– एक समय सृष्टिकर्ता ब्रम्हा र पालनकर्ता विष्णुबीच विवाद पर्‍यो । आ–अ‌ाफ्नाे कार्यक्षेत्र र महत्वका बारेमा विवाद उत्पन्न भयो । ब्रम्हाजीको पक्ष थियो– जो विविध रूपका वस्तुविशेष र प्राणी समुदायले सृष्टि सजाउँछ, उसको महत्ता कायम हुनु स्वाभाविक ठहर्छ, त्यसैले मेरो उच्चता स्वतःसिद्ध छ । ब्रम्हाको कथनमा अतिशयोक्ति थिएन ।
उता विष्णुको पक्ष पनि सशक्त थियो जन्माइदिएर मात्र कहाँ हुन्छ र ? बढी भार त त्यसले लिनुपर्छ, जो हुर्काउने, बढाउने र लालन–पालनमा भाग लिन्छ । त्यसैले नित्य, सूक्ष्म निर्विकार र विश्वम्भर मसित समता राख्न अरू कसले सक्छ र ?
कार्यकारी आफ्नै रूप ब्रम्हा र विष्णुमा मायाको प्रभावले उब्जेको अहम्ता महेश्वरलाई सह्‍य भएन । कोर उपदेशले त्यस किसिमको ममता समन गर्न नसकिने र दीर्घकालसम्म कायम नहुने देखेर आफैंद्वारा त्यसको अनुभव गराउन एक ज्योतिर्लिंग प्रार्दुभाव भयो ।
भगवान शिव र आद्यशक्तिको आराधना गर्ने मुख्य दिन हो महाशिवरात्री । भगवान शिवका गणहरू नाग, नन्दी, भृंगी, चौसी योगिनी, क्षेत्रपाल, वेताल, महाकाली, वीरभद्र आदिको आव्हान पूजा गरेर महाशिवरात्री मनाइन्छ ।
ऐश्वर्यशाली त्यो जोतिर्लिङ्ग सुरुमा सूक्ष्म थियो र लम्बाइचाहिँ पातालदेखि अनन्त लोकसम्म त्यसको अन्त्य कहाँ थियो थाहा भएन । लिंगोत्पत्तिसाथ आकाशवाणी भयो कि जसले यो लिंगको तलमाथि पहिल्याउँछ उही ठूलो । आअ‌ाफ्नाे महत्ता कायम राख्न तम्सेका ब्रम्हा र विष्णु लागे तल र माथि ।
विष्णु पाताल पुगी शेषनागसित भेटेर लिंगको मूलबारे सोधनी गर्दा उनले भने– अनादि रूप लिंगको मूल कसरी फेला पार्न सकिन्छ ? यस किसिमको विवादास्पद प्राकृत अवस्था छोडेर आनो निजी शान्तस्वरूप सम्झनुप¥यो । विष्णुलाई लाग्यो, ठीकै छ, नसकिने काममा दुराग्रह किन गर्नु ? लिंगको मूल फेला पार्न नसकेको कुरा ब्रम्हासमक्ष म स्पष्ट उल्लेख गर्नेछु भनी विष्णु फर्किए ।
त्यस्तै आकाशतिर लागेका ब्रम्हाजी ब्रम्हलोकभन्दा माथि गोलोक पुगे तर लिङ्गको शिर पत्ता लागेन । प्रतिस्पर्धामा विजयी नबन्ने स्थिति ब्रम्हाजीलाई आभास भयो । ब्रम्हाजीले बाटोमा भेटेका कामधेनु गाई र केतुकी पुष्पलाई साक्षी तुल्याएर पहिलेको ठाउँमा फर्किए ।
विष्णुले फेद पत्ता नलागेको कुरा स्विकारे । ब्रम्हाले झूटो साक्षी राखी लिङ्गको अन्त्य पत्ता लगाएको झूटो बयान दिए । झुटो बयान सुन्नासाथ भगवान रुद्र ज्योतिर्लिंग स्वरूपमा महाशिवरात्रीका दिन प्रकट भए । त्यो ज्योतिर्लिंग स्वरूपबाट ध्वनि उत्पन्न भयो– ब्रम्हाजी तिमीले झुटो साक्षी बटुलेर असत्य कर्म गर्‍यौ तसर्थ त्यसको दण्ड तिमीले भोग्नैपर्छ ।
केतकी पुष्प कुनै पनि पूजामा अबदेखि प्रयोग हुने छैन । कामधेनु गाईको पनि दूध, गहुँत आदि चले पनि तिम्रो मुखचाहिँ अपवित्र, अशुद्ध मानिनेछ ।
कलियुगमा गाईले अशुद्ध चिज खानेछन् भनेर ज्योतिर्लिंगबाट भगवान शिव अन्तध्र्यान हुनुभयो । असत्य बोल्ने गौको मुख अपवित्र र झूटो बयान दिने केतकी पुष्पलाई पूजामा वर्जित गरियो । भगवान शिवलाई गौर वर्ण, चन्द्रमौली महामृत्युञ्जय आदि नामले पुजा गरिन्छ ।
श्रीपशुपतिनाथ सहित विश्वभरिका ज्योतिर्लिङ्ग एवम् शिव मन्दिरमा विश्वभरिका शिव मन्दिरहरुमा धुमधामका साथ महाशिवरात्री पर्व मनाइन्छ । यो पर्वलाई सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्तिका साथै राष्ट्रिय शान्ति, सामाजिक सद्भाव, आपसी मैत्री तथा करुणाभावका साथ मनाऔं ।
-सनराइज खबरबाट साभार
Timi Hunchhau Jaha Jaha | Nepali Movie | Manish Sundar Shrestha,Malina Joshi,Swaroop Purush Dhakal
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले गरे आत्महत्या- उनको अन्तिम केही घण्टा